बेंटले आई-मोडेल, ODBC मार्फत अन्तर्क्रिया - जिओफुमाडास
नोभेम्बर, 2011 Microstation-बेन्टले
म-मोडेल एम्बेडेड एक्सएमएलको विश्लेषण, परामर्श र हाइलाइटिंगको सम्भावनासहित, Dgn फाईलहरूको प्रदर्शन लोकप्रिय गर्न बेंटलेको प्रस्ताव हो। यद्यपि त्यहाँ AutoDesk Revit र iPad सँग अन्तर्क्रिया गर्न प्लगइनहरू छन्, pdf पाठकहरू र विन्डोज explore अन्वेषकको लागि सिर्जना गरिएका कार्यहरू यस नयाँ चरणमा सबै भन्दा प्रस्ट देखिन्छ।
यी प्लगइनहरू डाउनलोड गर्न, ईन्टरओपेरेबिलिटी पृष्ठको लागि बेंटले सिस्टम iWare अनुप्रयोगहरूमा जानुहोस्। Bentley SELECT खाता हुनु आवश्यक छ, यदि तपाईंसँग छैन भने, तपाईं दर्ता गर्नुहोस् वा तिनीहरूलाई तपाईंको ईमेलमा पासवर्ड सम्झन सोध्नुहोस्। डाउनलोड गर्न अनुप्रयोगलाई विन्डोज for को लागि आई-मोडेल ओडीबीसी ड्राइभर भनिन्छ, त्यहाँ अन्य ड्राइभरहरू पनि छन्, केही बीटा संस्करणमा।
I-model एक dgn फाइल हो, जुन भयो कुनै पनि Bentley अनुप्रयोग द्वारा उत्पन्न (माइक्रोस्टेशन, बेन्टले नक्सा, जियोपाक, इत्यादि), जसको प्रकार हो तिनीहरूको वस्तुहरू xml नोडहरूसँग सम्बन्धित छन्, ताकि यो पढ्न र विश्लेषण गर्न सकिन्छ प्राय: प्रयोग कार्यक्रमहरू, जस्तै Windows7ब्राउजर सहित डाटाबेस, एक्सेल, आउटलुक।
सबै बेन्टले संस्करणहरू, I-model उत्पन्न गर्न सक्छ, भौगोलिकता रेखाको अवस्थामा, यो गर्न सक्दछ Bentley मानचित्र, तर होइन बेन्टले पावर दृश्य.
यस अवस्थामा हेर्नुहोस्, ODBC कनेक्टर को माध्यमबाट I-model को काम कसरी गर्ने
विन्डोज7बाट ODBC सिर्जना गर्नुहोस्
यी मध्ये कुनै पनि विन्डोज versions भन्दा पहिलेको संस्करणहरूको लागि अवस्थित छैन, अबदेखि त्यहाँ दुबै 7२ रb32 बिटहरू छन्। एक पटक स्थापनाकर्ता डाउनलोड भए पछि, जुन सबैभन्दा पछिल्लो संस्करणमा निर्भर गर्दछ नामको नाम छ dodd01000007en.msi यो निष्पादित र तयार छ:
कन्ट्रोल प्यानलमा पहुँच गर्दा, प्रशासकीय उपकरणहरू र ODBC डाटा स्रोतहरूमा यो देख्न सकिन्छ कि नयाँ मोड सिर्जना गर्न यो पहिले नै सम्भव छ I- मोडेलहरू पढ्ने पुलको रूपमा सेवा गर्दछ। यहाँ तपाईं पहुँच नाम, वर्णन र फोल्डर निर्दिष्ट गर्नुहोस् जहाँ dgn फाईलहरू समावेश छन्।
एकपटक ODBC सिर्जना भएपछि, यसलाई पहुँच, एक्सेल, SAP क्रिस्टल रिपोर्टहरू, VBA वा कुनै अन्य डाटाबेसबाट पहुँच गर्न सकिन्छ जुन ODBC लाई समर्थन गर्दछ। यो, अभ्यासमा, परम्परागतको माइग्रेसन हो mslink, जुन केवल Bentley बुझ्दछ, xfm नोड जुन xML नोडको रूपमा सम्मिलित छ र I-Model भनिने एक साधारण dgn हो। बेंटलेका लागि अनुप्रयोगहरू बनाउने बारेमा गाह्रो कुरा यो हो कि वीबीएबाट नगरेकोले डिजेनको विश्लेषण गर्न गाह्रो भयो किनकि तपाईले लि table्क ​​तालिकामा मिस्लि and्क र निर्यात गरिएको आधारभूत डाटा सायद भेट्नुहुने थिएन।
यसलाई पहुँच गर्न, डाटा ट्याबबाट, रोज्नुहोस् अन्य स्रोतहरूबाटत्यसपछि डेटा जडान विजार्डबाट, ODBC DSN र त्यसपछि I-model डेटा स्रोत.
हेर्नुहोस् कि एकचोटि dgn फाईल छनौट गर्दा, यो देख्न सकिन्छ कि यो डाटाबेस हो, त्यहाँ समावेश सबै वस्तुहरू। आश्चर्यचकित छ, यदि हामी यो कुरा सम्झन्छौं कि सुरुवात XFM यो अत्यन्तै पीडा थियो।
डाटा सेलहरूको दायरा भित्र आउँदछ जुन प्रक्रियामा परिभाषित गर्न सकिन्छ। एक्सेल भित्र, तपाईं आवश्यक अनुमतिहरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसले अनुमति दिन्छ।
यदि हामी पहुँचबाट यो गर्छौं
पहुँचबाट तपाईले बढी गर्न सक्नुहुनेछ, न केवल आयात गर्नुहोस्; यदि हामी मात्र तिनीहरू तिनीहरूलाई बाह्य तालिकाको रूपमा लिङ्क गर्न चाहानुहुन्छ:
ट्याबमा तालिका उपकरण, हामी छान्नुहोस् बाह्य डेटात्यसपछि थप, ODBC डाटाबेस। यहाँ हामी लागि निर्णय लिङ्क गरिएको तालिका सिर्जना गरेर डेटा स्रोतमा लिङ्क गर्नुहोस् र त्यहाँ छ, हाम्रो DNG पहुँचबाट देखा पर्यो।
यहाँ उनीहरूलाई अर्को आधारमा सम्बद्ध गर्न सम्भव छ, जस्तै नक्शाको पार्सलहरू कर रेजिष्टरको आधारमा। यो नक्शा र आधार बीच एक सीधा लिंक कायम गर्दछ, तब अखण्डता मापदण्ड, रिपोर्ट, आदि सिर्जना गर्न सकिन्छ।
SAP क्रिस्टल रिपोर्टबाट
रिपोर्ट विजार्ड, मानक, ODBC (ADO), बेन्टले आई-मोडेल प्रयोग गरी नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्। त्यसपछि Dgn फाईल छनौट गरियो, जहाँ फोल्डरमा ODBC ले हामीलाई निर्देशित गर्‍यो।
यो सरल छ (राम्रो छ, धेरै छैन)
C # मा ADO.NET प्रोजेक्टको उदाहरण पनि छ जुन भिजुअल स्टुडियो २०० 2008 सँग काम गर्न सकिन्छ, र जहाँ यो कसरी विकासको कामले देखाउँदछ जुन ODBC मार्फत I-Model सँग अन्तर्क्रिया गर्छ। यो, हाम्रो स्थापनामा निर्भर गर्दछ, पथमा भण्डार गरिएको हुनुपर्छ।
C: \_ ProgramData \_ Microsoft \_ Windows \_ Start Menu \_ Programs \_ Bentley \_ i-model ODBC Driver को लागि Windows7(बीटा)
मलाई लाग्छ कि यो बन्टलेबाट एक महत्वपूर्ण चरण हो, dgn लाई प्रयोगकर्ताको नजीक ल्याउन। यस अवस्थामा, यो dgn / dwg फाईल डाटाबेसको रूपमा पढ्न योग्य बनाउनु हो; जसले भेक्टर फाईलको रूपमा यसलाई हेर्न रोक्न ढोका खोल्छ र यसलाई अन्य अनुप्रयोगहरू द्वारा प्रयोग गरिएको अन्य डाटाबेसमा लि by्क गरेर कुराकानी गर्न सक्दछ।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो जियोबाइड, OGC डाटाको साथ अन्तर्क्रिया
अर्को पोस्ट ग्वाटेमाला सर्वेक्षण गर्ने कांग्रेसका विषयहरूअर्को »